ई-वालेट: चुनौती र सम्भावना
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार २२:१५
टेक्नोलोजीको बृद्धिले विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र क्याशलेस भुक्तानीका लागि डिजिटल वालेटको प्रयोगसँगै यसले डिजिटल विश्वको निर्माणमा राम्रो कदम आगाडि बढाएको छ। डिजिटल वालेट वा ई-वालेट एक प्रकारको इलेक्ट्रोनिक कार्ड हो जुन कम्प्युटर वा स्मार्ट फोन मार्फत अनलाइनमा गरिने लेनदेनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ई-वालेट भुक्तान गर्न व्यक्तिको बैंक खातासँग लिंक हुन आवश्यक छ। डिजिटल भुक्तानी वर्तमान समयमा एक चर्को विषय भएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा धेरै नयाँ प्लाटफोर्महरु बजारमा आएका छन् जसको कारणले डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिन निरन्तर प्रयास गर्दै डिजिटल लेनदेनमा ठोस विकास भएको छ। Covid-19 को प्रकोपको कारण र विश्वको वर्तमान परिदृश्य को कारण, डिजिटल भुक्तानहरु अब शिखरमा छन्। डिजिटल लेनदेनले वर्तमान मौद्रिक बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने संभावना बढेको देखिन्छ र निकट भविष्यमा नेपालको अर्थव्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्ने सक्छ।
ई-वालेट एक प्रकारको प्रिपेड खाता हो जसमा प्रयोगकर्ताहरूले भविष्यमा आफूले कुनै पनि अनलाइन लेनदेन गर्दा आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न सक्छन्। पासवर्डको साथ सुरक्षित यस ई-वालेटमा प्रयोगकर्ताले किराना, अनलाइन खरीद, उडान र बस टिकट, स्कूल शुल्क र अन्य धेरै भुक्तानी गर्न सक्छन्। ई-वालेटमा मुख्यत दुई कम्पोनेन्टहरु हुन्छन्, सफ्टवेयर र जानकारी। जहाँ सफ्टवेयर कम्पोनेन्टहरुले व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्दछ र डाटाको सुरक्षा गर्न को लागि ईन्क्रिप्शन प्रदान गर्दछ। जबकि जानकारी कम्पोनेन्टहरु प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराउने विवरणहरूको डाटाबेस हो। जसमा उनीहरूको नाम, शिपिङ ठेगाना, भुक्तान विधि, भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम, क्रेडिट वा डेबिट कार्ड विवरणहरू र अन्य धेरै जानकारीहरु समावेश हुन्छन्।
लकडाउनले गर्दा डिजिटल भुक्तानीले लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछ विकसित मुलुकमा यो एउटा चलन भएको छ । तर प्रस्न यो हो कि, नेपालको अर्थतन्त्र के क्याशलेस हुन तयार छ? के-के चुनौती र सम्भावनाहरू छन्?
अबको आउँदो समय अर्थात लकडाउन पछि डिजिटल भुक्तानी प्लाटफोर्महरुमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। दुवै सेवा प्रदायक र ग्राहकहरुले क्याशलेस लेनदेन विधि अपनाउने बारे विचार गर्नेछन्। यो निश्चित छ कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपले क्याशलेसमा जान सक्दैन, किनकि कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो अर्थव्यवस्थासँग यस्तो गर्न सकेको छैन र हामीले पनि यस्तो ठूलो परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। हामीले गर्न सक्ने उत्तम कार्य भनेकै गैर-नगदी लेनदेन(non-cash transaction) लाई प्रचार गर्नु हो। अर्को कुरा हामीसंग रातभरमा क्याशलेस हुन चाहिने संसाधनहरु पनि छैन। यदि हामी क्याशलेस भयौ भने पनि यो नेपाली जनतामा निर्भर हुन्छ कि यो प्रविधिलाई स्विकृति दिने वा नदिने किनकि अझै पनि धेरै जनता वित्तीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्,यस सम्बन्धि जानकारी पनि पूर्ण रूपमा भएको छैन। हामीले यसलाई एउटा यात्राको रुपमा लिनुपर्छ, जुन यात्रामा हामी पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन्छौं र सँगसँगै यस बिजनेस मोडेललाई जनताहरूको माजामा स्वीकार्न र लोकप्रिय बनाउनमा पनि केन्द्रित हुन्छौं। जब भुक्तान सेवा प्रदायक(Payment Service Provider) र भुक्तान सेवा अपरेटर(Payment Service Operator) को साथ विभिन्न सरोकारवालाहरु बिच सहयोगी मोडेलहरुको निर्माण भयो भने मात्र डिजिटल भुक्तान प्लाटर्फमहरुले नेपालको अर्थव्यवस्था बढाउन सक्छ।
ई-वालेटको क्षेत्रमा पहिलो चुनौती भनेकै यस क्षेत्रको स्विकृति लिनु हो। यो एउटा इकोसिस्टम हो जसमा प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल भुक्तानीको प्लाटफोर्महरुलाई स्वीकार गर्ने सरोकारवालाहरु पनि समान महत्त्वका साथ समान स्थानमा हुन्छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, सेवा प्रदायकहरु बाट सेवा दिने प्रक्रिया वा आफ्नो उत्पादनहरू/सेवाहरु बेच्नका निम्ति अनलाइन लेनदेन एकीकरण गर्नु पर्छ, जसलाई गर्न धेरै लामो समय लाग्छ। साथै सेवा प्रदायकहरुले स्वीकारने पद्धति तुलनात्मक रूपमा ढिलो छ। त्यसैले यस इकोसिस्टममा सेवा प्रदायकहरुलाई समावेश गर्ने प्रक्रिया चुनौतीको रुपमा आएको छ। स्थानीय रुपमा विकसित वा फ्रान्चाइज्ड डिजिटल भुक्तानी प्लाटर्फमहरु सञ्चालन र टिकाउनको लागि चाहिने स्रोतको कमी पनि अर्को चुनौती हो। प्रणाली, पूर्वाधार र सुरक्षा सुविधाहरूको उचित रूपमा अपरेसन नभएको पनि एउटा चुनौती कै रुपमा लिन सकिन्छ।
लकडाउन भन्दा पहिले सहरी क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानको प्रवृत्ति एउटा सुविधाको रुपमा लिने गरिन्थ्यो। तर, अब लकडाउन पछि यो एउटा सुविधा मात्र नभएर आवश्यकतामा परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। Covid-19 उद्योग र अर्थव्यवस्थाको लागि घातक साबित भयो, तर यो डिजिटल भुक्तानको लागि आफूलाई एक्सेल गर्ने एउटा अवसर बन्यो। हामीले यस लकडाउनको अवधिमा देख्यौं कसरी किराना, मेडिकल आपूर्ति,पैसा पठाउन/प्राप्त गर्ने आदि सबै कुरा नगदी लेनदेनबाट डिजिटल लेनदेनमा बदलिएको छ। बैंक,वित्तीय, सहकारीहरुमा पैसा जमेको अवस्थामा डिजिटल भुक्तानले अलि कति भएपनि समस्याको समाधान गरेको छ। Covid-19 को महामारी आएपछि डिजिटल लेनदेनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ र धेरै व्यक्तिहरूले डिजिटलाइजेशनलाई अँगाल्न थालेका छन्। व्यक्तिमा वालेट हुनुको मुख्य कारण नै नगद र कार्डहरु बोक्नु हो। डिजिटल युगमा, स्मार्टफोनले ती सबै बदल्न सक्छ। एक बैंकको खाताको जानकारीले सबै कुरा ई-वालेटको रुपमा बदलिन्छ। डिजिटल विभाजन र सुरक्षा जस्ता कारणले गर्दा १००% क्याशलेस अर्थव्यवस्था अझै टाढाको विषय भएको छ। तर, यो असम्भव छैन यदि हामी पर्याप्त कार्यहरू गर्दै चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न र जागरूकता बढाउनमा ध्यान दियौं भने क्याशलेस युगमा प्रवेश गर्न सक्छम।
लेखक : गौरब चिमरिया
संचारकर्मी ईश्वरी बरालको ‘हरेक रात सपनीमा’ सार्बजनिक (भिडियो सहित)
कोरोना र अनुत्तरित प्रश्नहरु
कोरोना संक्रमित क्याप्टेन लामा भन्छन्, यो रोगलाई सामान्य नठान्नु
के महामारीमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
आज सुनको भाउमा आयो सामान्य गिरावट